Soo nooleynta adeegyada Bulshada iyo dib u dhiska dalka oo London looga hadlay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Soo nooleynta adeegyada Bulshada iyo dib u dhiska dalka oo London looga hadlay “SAWIRRO”
Kulan looga hadlayay sidii dadka xirfadaha leh ee Qurba joogta ah ay uga qeyb qaadan la haayeen soo nooleynta adeegyada bulshada ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada London ee Wadanka Ingiriiska, kaasi oo ay ka qeyb galeen qeybaha bulshada ee magaalada London ku nool.
Kulanka oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen ururka ardeyda iyo xirfadleyda Soomaalida Qurbaha ku nool ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan WSSP iyo hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan socdaalka ee IOM ayaa dulucdiisu aheyd sidii loo kordhin lahaa saameynta dadka wax bartay ee dibada ku nool ay kaalin muuqata uga qaadan la haayeen dib u dhiska iyo horumarka dalka.
Shirka oo ka dhacay xarunta Jaamacada UCL ee magaalada London ayaa agaasimaha hay’adda WSSP Qaasim Maxamed Cali waxa uu sheegay in ururkoodu oo kaalin ka geystay caawinta adeegyada arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo wax-barashada iyaga oo aanay jirin cid ku caawineysay intii ay ku guda jireen howshaasi.
Frantz Celestin oo ah agaasimaha barnaamijyada IOM ayaa sheegay in hay’addu ay diyaar u tahay in ay qarashka ka bixiso qof kasta oo Soomaali xirfad le ah, isla markaana diyaar u ah in uu dib u dhiska wadanka ka qeyb qaato.
Markabkii dowladda u dirtay Yemen oo ku xirtay dekadda Mukallah
Wasiirka Warfaafinta iyo ku-xigeenkiisa oo ka qeyb galay tartan heesaha hirgalay “SAWIRRO”